Avis Myanmar to increase investments in Myanmar by $4 million | Myanmar Business Today
HomeAutomobileAvis Myanmar to increase investments in Myanmar by $4 million
Avis Myanmar plans to continue the investment by tripling the size of Avis Fleet in 2021 with estimated investment values around USD4million since it is optimistic about the prospect of the country after this challenging pandemic.
The pandemic Covid-19 profoundly changed the global political and economic arena. With the rising number of total COVID-19 confirmed cases in Myanmar, the economy and businesses especially in the tourism industry have been severely affected.
“We are confident in Myanmar’s long-term economic prospects although the pandemic triggered some business disruptions that many industries are facing. We strongly believe that Myanmar will pass this difficult time and the country will regain economic growth that stimulates the investments that will give us the opportunity to deliver our products and services to the end-users,” Prasoporn Tansupasiri, General Manager of Avis Myanmar, said.
The outbreak posesahuge impact on the vehicle rental business due to the restrictions, the absence of tourists, and international businesses.
“I am afraid that there is no exception to the car rental business when it comes to Covid-19 pandemic impact. As the pandemic posedagreat challenge to global mobility, Avis’s short-term car rental volume especially hotel limousine dropped significantly, starting from late Q1 and continued till present because of stricter travel restrictions,” Prasoporn Tansupasiri added.
Avis Myanmar has continued the business operation in accordance with the guidelines by the Ministry of Health and Sports of Myanmar as well as the Avis Global Operational Readiness Health and Safety Standards. To combat the effect from Covid-19, Avis Myanmar has introduced new values add services to meet customers’ needs.
The company said it managed short-term units to serve as monthly rentals as the demand for private vehicles elevated.
Some companies hire extra units to mitigate the risk of their employees using public transportation. In response to this, the company launched Avis Ferry Service which includes vehicle rental, driver service, fuel, passenger insurance, route management, and disinfection service in Yangon on multiple platforms like van and minibus.
On top of that, Avis plans to open two new outlets in business cities such as Nay Pyi Taw and Mandalay. Around 50 new job opportunities will be created for local people and will provideaset of trainings to enhance staff capacity.
Avis Myanmar သည်လက်ရှိ အကျပ်အတည်း အခက်အခဲကာလကိုကျော်လွန်ပြီးပါက နိုင်ငံ၏တိုးတက်လာမည့်အလားအလာကို ယုံကြည်သောကြောင့် ၂၀၂၁တွင် ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ ၄ မီလီယံဖြင့် ကားအစီးအရေအတွက်ကို ၃ဆတိုးစေပြီး ရင်းနှီး မြုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာရောဂါကပ်ဆိုး COVID-19 သည် ကမ္ဘာစီးပွားရေး နှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ များကို သိသာစွာပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတည်ပြုလူနာ ဦးရေများပြားလာသည်နှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်သိသာစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
“ကျွန်မတို့က လက်ရှိမှာ ရောဂါကပ်ဆိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တချို့ စီးပွားရေး တွေမှာ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေ ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခက်အခဲအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကျော်ဖြတ်ပြီး တိုင်းပြည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကို တိုးမြင့်စေနိုင်မည့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်သလို ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများကို အထူးကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အခွင့်အရေးရရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်” ဟု Avis Myanmar ၏ General Managerဖြစ်သူ Ms. Prasoporn Tansupasiri ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ခရီးသွားများ လာရောက်လည်ပါတ်နိုင်မှုတွင် ကန့်သတ်ထားချက်များရှိပါသဖြင့် ကားအငှားလုပ်ငန်းအပေါ်ကြီးမားစွာ အကျိုးသက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
“ကပ်ရောဂါ ဆိုး Covid-19 အကျိုးသက်ရောက်မှုက တစ်ခြားစီးပွားရေး ကဏ္ဍ များကဲ့သို့ ကားအငှားလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာလည်း မခြွင်းချန်ပဲသက်ရောက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကားအငှား လုပ်ငန်းအပေါ် ကပ်ရောဂါ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် အခက်အခဲများစွာရှိပြီး Avis ၏ ရေတိုနေ့တပိုင်း ကားအငှားလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှု အထူးသဖြင့် ဟိုတယ်သုံးဇိမ်ခံကား အသုံးပြုမှုသည် ခရီးသွားလာရေးကန့်သတ်မှုများ ပိုမိုတင်းကြပ်လာခြင်းကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် Q1 မှစပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ သိသိသာသာလျော့ကျခဲ့ပါသည်” ဟု Prasoporn Tansupasiri က ဆိုသည်။
Avis Myanmar သည် မြန်မာ နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (MOHS) မှထုတ်ပြန်ထားသော Covid-19 ကာကွယ်ရေးလမ်းညွန်ချက်များနှင့်သာမက Avis Global Operational Readiness Health and Safety Standards မှသတ်မှတ်ထားသော ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး စံသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Covid-19 ရောဂါဆိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများ၏ အကြိုက်နှင့်ကိုက်ညီသော အပိုထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို Avis Myanmar မှ မိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချို့ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုမှုကိုလျော့ကျစေရန် ကားများငှားရမ်း အသုံးပြုကြပါသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သော Van နှင့် Minibus ကားအမျိုးအစားများစွာ ပါဝင်သော Ferry Service (ဖယ်ရီဝန်ဆောင်မှု) တို့ဖြင့် ကားငှားရမ်းမှု၊ ကားဆရာ ဝန်ဆောင်မှု၊ လောင်စာဆီများ၊ ခရီးသည် အာမခံဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ၊ လမ်းကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းဝန်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သူဟု ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
Avis သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော်များဖြစ်သော နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ရုံးခွဲအသစ်များ ဖွင့်လှစ်ပေးသွားရန်အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်ကို ဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်သလို ဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်ပေးရန် သင်တန်းများလည်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleGrab Launches GrabAds, Myanmar’s First Digital Display Advertising Service in Grab Taxi
Next articleMyanmar to conductasurvey on over 2,500 MSMEs to identify the situation